नयाँ शेवरलेट Niva। सिंहावलोकन
नयाँ Niva सबैभन्दा महंगा घरेलू एसयूवी हुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसलाई प्रसिद्ध इटालियन स्टूडियो Bertone द्वारा बनाईएको हो डिजाइन। लोकप्रिय विश्वास विपरीत, कि शेवरलेट Niva - यो Niva छ, तर अझै शेवरलेट, अघिल्लो संस्करण को लोकप्रियता छैन त कम थियो छैन।
नयाँ Niva अन्तिम परिमार्जन एक सुधारिएको पायो छ अगाडि निलम्बन, रबर-धातु bushings र परिमार्जन इन्जिन। केही ठाउँमा शारीरिक थप जंग सुरक्षा पाए। यसको पूर्ववर्ती तुलना, नयाँ एसयूवी कम्पन कम, noticeably शान्त छ। यस सन्दर्भमा, सवारी सान्त्वना उच्च भएको छ।
साथै, नयाँ Niva आधुनिक सुरक्षा प्रणाली पाए। अगाडि यात्री सेट गर्न airbag, परिष्कृत prednatyazhitelnye बेल्ट। सँगै नयाँ मोडेल यो सबै गाडीको सिट को आन्दोलन सुविधाजनक र सुरक्षित बनाउँछ।
हामीले नयाँ शेवरलेट Niva को फोटो हेर्न भने, डिजाइन बाहिरी डिजाइनर को मामला मा अवसर गर्न उठ्नुभयो। नरम चिकना शरीर लाइनहरु, उच्च बस्ने, कालो छत रेल - को "मानिसहरूको" एसयूवी विशिष्ट छवि। कुनै तामझाम, तर कुनै पनि आक्रामक टिप्पणीहरू। स्टाइलिश र राम्रो-natured कामदार।
थप .मांग निरीक्षण शरीर तत्व, ढोका, रोशनी को प्रकाश काम बीच ठूलो अंतराल को अभाव ध्यान दिनुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ, र नै स्तरमा ठीक सेट। त्यहाँ छैन मा एक ठूलो अन्तराल रूपमा, "दुखेको" त्यस्तो परिचित vazovskaya छ ढोका टिका। सबै उच्च गुणवत्ता संग र विवेक मा बनेको छ।
एउटै पनि भित्री को भने गर्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश (हुनत केही भाग्यवस भन्न सक्छ), को भित्री मा लगभग पूर्ण असल पुरानो Niva, सबै accustomed भएका छन् जो "आत्मा" गायब। भित्री डिजाइन हेर्न गर्दैन utilitarian र शेवरलेट को स्ट्रोक केही उपस्थिति यो सिर्फ Niva छैन भनेर सम्झन्छन्। को स्थापना परम्परा अनुसार VAZ प्लास्टिक को यात्री खण्ड को भित्री मा प्रबल। तर, हार्ड स्पर्श सामाग्री यसलाई एक texturally नरम जस्तो देखिन्छ।
तपाईं भित्री नियालेर लिन भने, हामीले नयाँ Niva आफ्नो विदेशी समकक्षों केही उधारो भनेर हेर्न सक्छन्। Deflectors वेंटिलेशन सिस्टम को स्पष्ट संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिनिधिहरु को कि जस्तै हो। जसरी "अमेरिकी" मांसल ड्यासबोर्डमा बटन गरे। पछिल्लो यात्रु धेरै तेहो मोडेल को reminiscent, लाउंज मा बस्न मदत गर्न माथिल्लो ह्यान्डल।
को भित्री गुण अनुसार आलोचना transverse प्ले ऐशट्रे ढक्कन र पन्जा बक्स को ढक्कन अन्तर्गत आएको छ। तर नयाँ शेवरलेट Niva को मूल्य यस्तो कमजोरीहरू गनगन गर्न, 500 हजार सम्म पकड गर्दैन दिइएको हास्यास्पद छ। समग्रमा, राम्रो रंग र असबाब, र doorway एउटा सुखद यात्रा समायोज्य स्तम्भ र सजावट संग बाक्लो ठोस पाङ्ग्रा।
उनको बारेमा खैर। लक्जरी एसयूवी को Niva मालिकहरूलाई कुनै पनि संदेह मनोवृत्ति, रूसी बराबर सजिलो संग "जीप" र शहरी राजमार्ग, ग्रामीण सडक र vicissitudes को किलोमिटर कसरी हटाउन हुनेछ। यस बन्द-सडक सबै-भू-भाग वाहन सम्झन्छन् यसको 80-लीटर इन्जिन संग संकुचित मिसिन। शेवरलेट Niva कार को परीक्षण ड्राइभ द्वारा देखाइएको एक शहरी वातावरणमा उत्तिकै आरामदायी महसुस र मड्डी भू-भाग अन्तर्गत। सबै बयान 1350 किलो को बेमेल वजन टीस र पाङ्ग्रा ड्राइव मोटर शक्ति निरर्थक अनुमान गरियो। यसलाई सही हात मा छ विशेष गरी जब वाहन, राम्रो क्षमता छ।
टायर के दबाव हुनुपर्छ?
Wiper मोटर: मर्मतका र मरम्मत। Wipers काम छैन: के?
"टोयोटा-मर्कूस-2", एक शरीर 110: सवारी साधन वर्णन, मूल्यांकन, विशेषताहरु
तेल परिवर्तन गर्दा इन्जिन निस्तब्धता। समीक्षा, नियम, विशेषज्ञ सल्लाह
घरको लागि सुन्दर सजावटी रूखहरू: उत्तम, फोटो र समीक्षाहरूको सूची
सेवा "मेघाफोन" "फ्रेम नियन्त्रण को वर्णन"
एक रोचक प्रश्न: "एक स्तनपान आमा बारबेक्यू सक्नुहुन्छ?"
प्रस्तुति को डिजाइन: सिर्जना सुझावहरू
को सेन्ट र चमत्कार कामदार Mitrofan वोरोनिश। विभिन्न परिस्थितिमा मद्दत लागि Mitrofan वोरोनिश प्रार्थना
आक्साइड को प्रकृति कस्तो छ
कुकुर stalin - पर्दाफास मिथकों
जो मनोविज्ञान मा कालो मतलब?
गरम स्टेरिड़: आफ्नै हात सेट